Halkaan ka Dhegeyso khudbaddii Ra´isal wasaare Geedi uu shirkii shalay la yeeshay Odayaasha Hawiye ka jeediyay.
Halkaan ka dhageyso khudbadii Cali Geedi
Ra’isal wasaaraha Dowladda KMG ah ee Soomaaliya Prof. Cali Maxamed Geedi ayaa maalintii shalay aheyd heshiis dhinacyo badan ka koobon oo ay ku jireen xabad joojin rasmiya iyo kuwa kalaba la saxiixday Golaha Dhaqanka iyo Midnimada Beelaha Hawiye garabka uu hogaanka u yahay Maxamed Xasan Xaad.
Shirkii shalay ayaa Prof. Geedi waxa uu kula saxiixday Odayaasha Dhaqanka Hawiye hashiis xabad joojin ahaa iyadoo heshiiskaasi markii uu dhacay ka gadaalna sida wada jir ahi ugu baaqeen ra’isal wasaaraha iyo gudoomiyaha Hawiye Maxamed Xasan Xaad in ay dib ugu soo laabtaan guryahooda dadka ka cararay rabshadaha bilo jirsaday ee ka tagaan Muqdisho.
← Toban qof oo ay ka mid yihiin Ciidamo ka tirsan dowladda KMG ah oo maanta ku dhaawacmay qaraxyo lala eegtay baabuur ay wateen Ciidamada Boliska Dowladda KMG ah Magaalada Muqdisho.
Qarax aad u xoogan oo ay dad ku dhinteen oo saaka barqadii ka dhacay magaalada Kismaayo. →